Muhondo iyi inobuda, kuwedzera kune masks, dziviriro, machira emachira anoitawo basa ripi? - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Muhondo iyi inobuda, kuwedzera kune masks, dziviriro, machira emachira anoitawo basa ripi?
Ino Mutambo wePasika, nekuda kwechinoerekana chaitika koronavirus pneumonia kubuda uye isingawanzo, mamiriro achangoburwa ehutachiona hwehutachiona panguva ino hukabata mwoyo yevanhu. parizvino, kurwisa denda iri kuchiri kukwira pamusoro pezvinetso, asi pasi pekudzivirirwa kwakabatana uye kutonga kwevanhu munyika yese, tinotenda kuti iyi denda kudzivirira uye kutonga hondo, zvirokwazvo tichakunda.
Seyemberi yakakosha indasitiri yehupfumi hwenyika, indasitiri yemachira yakafamba kwenguva yakareba kwehunyanzvi hwekugadzira uye kushandurwa kwemaindasitiri. Kunyanya nekusimudzira nekukurumidza kweiyo nonwoven tekinoroji, iyo minda yekushandisa uye chiyero chemaindasitiri machira akave achiwedzerwa kuwedzerwa, iyo yakatora chikamu chakakosha muhondo yekurwisa denda. Iri pepa rinonyanya kubva kune yekuzvimiririra kuchengetedza, hutsanana hwemunhu uye kwekuvaka zvipatara zvenguva pfupi uye dzimwe nzvimbo nhatu dzekushushikana neruzhinji kuratidza mashandisirwo anoitwa maindasitiri emachira.
1. Kuvhiya mask
Masks ndizvo zvinodikanwa zvezuva nezuva zvevashandi vekurapa kubata varwere uye vanhu kuti vaende kunodzivirira mune ino chirwere chechisimba. pari zvino, China \_ "masks ekurapa anonyanya kukamuraniswa kuva matatu marudzi: masiki ekurapa ane huwandu hwepamusoro hwekudzivirira, Masks ekuvhiya anowanzo shandiswa mune zvinopinda nzvimbo dzekushandisa dzakadai sekamuri rekushandisa uye masasoni ekuvhiya anowanzo wanda. Izvo zvigadzirwa zveaya masks ekuvhiya anonyanya kuve polypropylene, uye dhizaini yacho inowanzo kuve yakaumbwa neyakagadzika akawanda ezvimwe zvinhu zvisiriwo. Icho chinonyanya kujairika chimiro cheSMS (i.e. Spunbonded -- fusion-spunbonded). Iyo yepakati-dura fusion-spunbonded nonwoven zvinhu ine yakanaka hutachiona kusefa maitiro. (nezvimwe, ona: sainzi pamaski)
2. Chipfeko chinodzivirira chekurapa
Chipfeko chekudzivirira chekurapa chinogona kuvhara zvinobudirira kupinda kwehutachiona uye mavairasi, uye zvakakosha kwazvo kuchengetedza kuchengetedzwa kwevashandi vekurapa uye vashandi munzvimbo dzeveruzhinji. parizvino, mazhinji ezvipfeko zvekudzivirira zvekurapa anoshandisawo machira asiriwoven seachinhu chikuru mbishi. Izvo zvinowanzoshandiswa mumusika zvinonyanya kusanganisira polypropylene spunbonded machira, jira rakarukwa rakavhenganiswa polyester fiber uye huni pulp, polypropylene SMS nonwoven machira uye zvimwe zvinhu zvisiri zvinhu zvemaposheni. (kuti uwane rumwe ruzivo, ona mareferensi: izvo zvishandiso zvinoshandiswa kune zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa)
3. Kurapa disinfection doro mapiritsi
Iyo yekutanga midziyo yekurapa disinfecting doro piritsi haisi nonwoventi zvinhu, iyo yekugadzirisa tekinoroji ndiyo mvura nzvimbo zhinji, iyo yakasviba iyo USES inogona kuve viscose fiber, polyester fiber, polyethylene kana polypropylene. Mushure mekudhakwa kunowedzerwa muchigadzirwa, ine hunhu hwekuchenesa, antibacterial, kukurumidza kunyorera muyero, yakasimba mvura yekuchengetedza kukwanisa uye yakakwirira mehendiki simba inodikanwa nehutano hwekurapa zvinhu, uye inogona kushandiswa kwekurwadzisa usati waiswa jekiseni uye nekukurumidza kurapwa. Inogona zvakare kushandiswa kuchenesa uye disinate zvinyorwa zvemumba, matoyi, nezvimwewo.
4. Sterile unopukuta
Disipu rinopukuta rine hunhu hwekutakurika kutakura uye kushandisa, uye inogona kutamba chinzvimbo chekuchenesa uye kuuraya hutachiona mukuchengetedzwa kwekudzoka kwevanhu. Disinfecting rakanyorova thauro ivhavha yejasi ne spunlaced isina nonwoven zvinhu zvinowanzo, iyo yakasviba senge yakakodzera kuwedzera disinfectant inoita kuti chigadzirwa icho chine yakachena uye hosha yekuuraya hutachiona, vane yakanaka padyo ganda maitiro uye disinfecting maitiro, inogona kushandiswa kucheneswa kwevanhu \_ 'maoko kana wabuda uye nzvimbo yeruzhinji armrest yapukutwa.
Mukugadziriswa kwekuvaka kwe vulcan gomo chipatara, iyo impermeable dura renheyo yayo inotora chimiro che "20cm jecha cushion + polypropylene filament nonwoven geotextile + HDPE geotextile + polypropylene filament nonwoven geotextile + sand cushion", kureva chimiro che "machira maviri nefirimu rimwe". Iyo yakagadzirwa neiyo isirivenven geotextile uye geotextile nekudziya-infrared kupisa kweovheni pamativi ese eiyo geofilm, iyo inodzvanywa pamwe chete neiyo fluidization nzira kana neiyo inotungamira roller. Pakati pavo, nonwoven geotextile inogona kuvhara zvimedu zvinopinza muvhu kuchengetedza geotextile (kuti uwane rumwe ruzivo nezve geotextile, Ndokumbira utarise nyaya yedu inokosha pane maindasitiri machira mune 2019).
Pamusoro pe, mukutarisa geotextile mugomo retsvina uye gomo rechimurenga rekuvaka chipatara rinokosha, bhuku iri munaFebruary 7 muWeChat ichave yakatsaurwa kune yayo yakazara kududzirwa, gara tuned!
(kwazvinobva: machira zuva nezuva)
Ndeipi inopesana nehutachiona mushini wemaski? Kubva pane chidiki chemaonero ekupa iwe mhinduro dzehunyanzvi
Chii chinonzi spandex chakafukidzwa yarn?